Sida loo diro fariimo bilaa dhawaaq ah Telegram-ka Android | Androidsis
Telegram waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan suuqa, iyadoo si cad ula tartameysa WhatsApp. Mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee barnaamijkan ayaa ah inuu helo casriyeyn joogto ah. Markii ugu dambeysay ee ay cusbooneysiiso Waxay nooga tageen shaqo dan weyn leh, waa maxay fariimaha aamusan. Sidaa darteed, hoosta waxaan kuugu sheegi doonaa sida loo isticmaalo.
Sidan oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad dirto fariimo bilaa dhawaaq ah Telegram. Shaqada kicisay xiisaha badan ee isticmaalayaasha markii lagu dhawaaqay dhowr usbuuc ka hor iyo inaan horeyba ugu raaxeysan karno arjiga farriinta ee Android. Isticmaalka xulashadan waa mid aad u fudud.
Waxaan ku qasbanaaneynaa inaan wadahadal ku furno Telegram, qofkasta iyo wada sheekaysiga waa inaan ku qornaa fariin. Dareenkaan, waxay yihiin isla talaabooyinka ay tahay inaan raacno markaan u dirayno fariin habka caadiga ah ee arjiga. Laakiin marka aan diyaarino farriinta, waa inaan sameynaa wax ka duwan.
Xaaladdan oo kale waa inaanu riixnaa oo qabannaa badhanka dirista. Marka, aan aragno waxa ikhtiyaariga ah ee soo baxa hoosta badhanka dirida ee ah kan «dir bilaa dhawaaq». Tani waa ikhtiyaarka aan dooneyno inaan ku isticmaalno kiiskan, markaa waxaan ku riixnaa si aan ugu isticmaalno.
Farriintan waxaa lagu soo diri doonaa sheeko ku saabsan Telegram sida caadiga ah, kaliya markan wax cod ah lama siidayo. Tani waxay u qaadaneysaa inuu qofku helo fariinta, laakiin uusan cod ka sameyn doonin taleefankiisa. Ikhtiyaar wanaagsan haddii qofkani shaqeynayo, fasal ama kulan. Sidaas ayaanan u dhibsanayn.
Shaki la'aan, waxaa loogu yeeraa inay ka mid ahaato fursadaha ugu caansan Telegram ee bilaha soo socda. Marka markaad rabto inaad farriin ugu dirto arjiga, laakiin uusan ku sii deyneynin codka taleefanka qofka qaata, sidan ayaa lagu sameeyaa. Aad u fudud sida aad arki karto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loo diro farriimo bilaa dhawaaq ah Telegram
Redmi Xusuusin 8 Pro wuxuu leeyahay qayb kooban oo ah World of Warcraft